Izitayela ezi-5 Zokumaketha Kwekuhamba Izidingo Zakho Zomkhiqizo Zokutholwa | Martech Zone
Izitayela ezi-5 Zokumaketha Kwekuhamba Izidingo Zakho Zomkhiqizo Zokutholwa
NgoMgqibelo, July 25, 2015 NgoMgqibelo, July 25, 2015 Douglas Karr
Osaziwayo Cruises yethule isiza ngoMashi wango-2015 esiholele ekukhuleni okungu-12% kokubhukha okuvela kumadivayisi eselula / amathebulethi emasontweni amabili okuqala, ukwanda okungu-3% kwemali engenayo eku-inthanethi nokwenyuka ngo-140% kwemali engenayo eku-inthanethi. Bakufeze lokhu ngokuqukethwe okuthuthukile kohambo lwesayithi, izithombe ezinamandla nenqubo yokubhuka eyenziwe lula - ngokuthinta izitayela zedijithali nabahambi.
Ukwenza ngcono uhambo lwamaselula lwewebhusayithi yayo, ukwandisa ukuguqulwa futhi uthumele umuzwa omuhle womkhiqizo ngokuhambisana namanani okunethezeka enkampani, i-Celebrity Cruises isebenze nomhlinzeki wobuchwepheshe besipiliyoni samakhasimende Sdl nokubonisana kwedijithali Izakhiwo zokwakha.
Imikhiqizo yokuhamba yomhlaba kumele yanelise izidingo zabagibeli nezivakashi kokubili mathupha kanye naku-inthanethi, ngesikhathi sangempela nangezilimi eziningi. Lokhu kusho ukuqinisekisa isipiliyoni esingenamthungo, esingaguquguquki kuziteshi zonke nasekusebenzisaneni. Ukufeza lokhu, abathengisi kumele baguqule amasu abo njengoba isimilo samakhasimende kanye nokuthandwayo kuguquka, kugcinwa lezi zinkambiso ezinhlanu zohambo lwedijithali engqondweni. I-Paige O'Neill, i-CMO, i-SDL
Imboni yezokuvakasha yomhlaba manje ibhekene nenselelo eyingqayizivele yokwanelisa izidingo zabahambi mathupha kanye naku-inthanethi, ngesikhathi sangempela nangezilimi eziningi. Ukuze ufinyelele futhi weqe izimfuno zabahambi, ama-brand kufanele athuthukise indlela yokushesha ngokwengeziwe ngokuqonda izitayela ezi-5 zokuhamba ezakha ikusasa lesipiliyoni sedijithali.
Izindlela ezi-5 zokuhamba ezakha ikusasa lesipiliyoni sedijithali
Ukwandiswa Komphakathi - Abahambi abathule abasakhulumi futhi bazwakalisa ukukhathazeka online ngaphandle kokusho izwi. Basebenzisa amathuluzi edijithali futhi abasadingi ukubanjwa ngesandla komuntu
Ukwenza ngezifiso Kususelwa kokuncamelayo - Abahambi abahlukumezekile bahlulwa ukukhetha kwe-inthanethi. Abathengisi kumele bahambise imininingwane eqondisiwe, eyenziwe ngezifiso kubahambi abasebenzisa idatha futhi baphathe i-CX engcono
Ukusebenziseka Kwe-Digital Experience - Okubonakalayo ulimi olusha lwenkathi yedijithali. Abathengi bawazisa kakhulu umbono wabanye ngaphezu kwanoma ikuphi ukumaketha okukhulumayo
Ukuphazamiseka Kwamaselula - I-Uber ne-AirBnB yizibonelo zabaphazamisayo eziguquke zaba amathuluzi wokubambisana.
Ukuzenzela Isevisi Yedijithali - Namuhla ama-39% weminyaka eyi-Millennials ahamba ngohambo lwawo nge-metasearch kunama-ejensi wokuvakasha ajwayelekile aku-inthanethi (ama-OTA) noma ukuzulazula kwesayithi lomkhiqizo ngokusho kwabaphenyi bedijithali. Imikhiqizo yezokuvakasha kufanele icabange ngaphezu kokufakwa kuhlu kokuhamba futhi ibhekane nesidingo sokuxhumana ngokwesimo samasiko ukuletha okulindelwe ngabahambi emhlabeni jikelele.
Umaki Wakho Ukhona Ukukusiza
Yuri Shub (@YuriSlace)
Jul 28, 2015 ngo-4: 55 PM
Sawubona, indatshana enhle, ngiyabonga!
ucabanga ukuthi yiziphi izinto ezi-3 ezibaluleke kakhulu kuhlelo lokusebenza olusha lokubhuka kokuvakasha namuhla?